isiphephelo Archives - Ikhasi 2 kwangu-3 - Countdown to the Kingdom
Tag Archives: isiphephelo
Isikhathi seSt. Joseph
Ukungena ngaphansi kokuvikelwa okungokomoya kukaSt.
Edson - Kungekudala, Izilingo Ezinkulu
… Kepha ukuvikelwa kungaphakathi kwenhliziyo engenacala.
IValeria - UJesu Uzobuya Maduzane
Kepha okokuqala, izivivinyo zizovela kungazelelwe…
UGisella - Yiba NjengoNowa
Wonke umuntu wayemthatha njengomsangano, kepha wayenokholo.
Edson - Inhliziyo Yami, Induku Yombani
Ngokushesha, iSonto Elingcwele lizolimala.
IMedjugorje - USathane Ufuna Impi Nenzondo
UNkulunkulu uzoba amandla akho nesiphephelo sakho.
«Langaphambilini 1 2 3 Okulandelayo »